विद्युत प्राधिकरण र नेपाल एयरलाइन्सबीच के-के भए सम्झौता ? « Canada Nepal
विद्युत प्राधिकरण र नेपाल एयरलाइन्सबीच के-के भए सम्झौता ?
काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल एयरलाइन्स (एनएसी) बीच हवाई सेवामा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सोमबार भएको यससम्बन्धी सम्झौतमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज घिमिरेले हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौताअनुसार एनएसीमार्फत यात्रा गर्दा प्राधिकरणका कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारले टिकटमा १५ प्रतिशत र सामान ढुवानीमा ५-१० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।
प्रकाशित मिति : पुस १९, २०७८ सोमबार ६ : ५४ बजे